Fitaka be vava fa tsy nisy akory ilay fanafihana ny alin’ny 30 hifoha 31 martsa teny Androhibe ka nahavery ny “huiles essentielles ylang-ylang sy géranium” no vesatra nisamborana azy. izay mpiambina nefa izy ihany no nanatanteraka ny halatra. Niangavy tamin’ilay mpiasa vavy izy mba handainga tamin’ny polisy. Nony nanatanteraka ny fanadihadiana anefa ny polisy ao amin’ny sampana misahana ny ady amin’ny heloka bevava dia nipoitra fa tsy nisy ny fanafihana fa noforonina. Fantatra fa navoakany mialoha ny toeram-piasany ireo entana sarobidy ireo ary namidiny tamin’ny mpambongady sy mpaninjara, izay tsy nahalala ho entana halatra. Mbola nahatrarana ambin’entana 132 kg izay 8 bidon ka naverina tany amin’ny tompony. Natolotra ny fampanoavana omaly alakamisy 23 mey ny tenany.